Abriil | 2013 | WEEJIDOW
Archive for Abriil, 2013
War CULUS: Wiil uu Dhalay Sheekh Caan ah oo katirsan Al-Shabaab oo kamid noqday Dadkii Maanta lagu toogtay Magaalada …
Abriil 30, 2013
Sida ay baahiyeen Qaar kamid ah Warbaahinta Afka Al-Shabaab ku hadasha Wiil uu dhalay mid kamid ah Wadaada sida weyn u taageera Al-Shabaab ayaa kamid noqday 13-qof oo maanta Xukun Dil ah lagula fuliyay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Wiil uu dhalay Sheekh Xasan Takar oo kamid ah Wadaada caanka ah EE u dhashey REER PUNTLAND ee hadda ka tirsan Al-Shabaab katirsan ayaa kamid ahaa dhalinyaradii maanta lagu toogtay Magaalada Boosaaso kaa oo mudo ku xirnaa Xabsi ku yaala Magaalada Boosaaso.
Sheekh Xasan Takar oo ka hadlay Dilka Wiilkiisa ayaa sheegay in inkastoo uu qalbigiisa la xunuunsanayo sida foosha xun ee loo dilay wiilkiisa iyo dhallinyarada kale ee Maanta la toogtay , haddana uu ku faraxsanyahay darajada Shahaadada ee uu Alle SWT ku guuleeyay wiilkiisa iyo Dadkii kale ee Maanta la toogtay.
Al-Shabaab ayaa si kulul u cambaareesay Dilkii Maanta lagu fuliyay 13-qof oo mid kamid ah aheed Haweeney kuwaa oo lagu eedeeyay in Al-Shabaab katirsanaayeen ayna Dilal iyo Qaraxyo kala duwan ka fuliyeen Deegaano katirsan Maamulka Puntiland.
C/Fataax Xaaji “Sideed ka mid ah dadka la toogtay waa reer Puntland, inta kalana Koonfur weeye”
C/Fataax Xaaji Aadan ayaa wuxuu meesha ka saaray in inta badan dadkii maanta lagu toogtay Magaalada Boosaaso, ay ka soo jeedaan Gobolada Koonfureed ee Soomaaliya.
Waxaa maanta si weyn leeskula dhex maraayay in inta badan dadka lagu dilay fagaaraha Biyo Kulule ee Magaalada Boosaaso, ay ka soo wada jeedaan Koonfurta Somaliya.
Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad Ciidamada ee Gobolada Bari iyo Sanaag ee Puntland C/Fataax Xaaji Aadan, ayaa wuxuu caawa cadeeyay inaysan inta badan dadkaan ka soo jeedin Gobolada Koonfureed ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha ayaa wuxuu sheegay in sideed ka mid ah dadkii la toogtay ay ka soo jeedaan Deegaanada Puntland, halka inta kalana ay ka soo jeedaan Koonfurta Soomaaliya, sida uu yiri.
“Sideed ka mid ah dadka la toogtay waa reer Puntland, inta kalana Koonfur weeye.
Boqolkiiba toddobaatan (70%) waa reer Puntland.” ayuu yiri Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad Ciidamada ee Gobolada Bari iyo Sanaag ee Puntland, oo caawa la hadlay VOA-da.
C/Fataax Xaaji ayaa sidoo kale sheegay inaan dadkaan leeska toogan, laakiin loo toogtay iyagoo horey dilal iyo qaraxyaba uga geystay sida uu yiri Deegaanada Puntland.
Dadka la toogtay ayuu ku sheegay inay Puntland ku laayeen Culimo, Saraakiil, wax garad iyo Salaadiinba, taasina ay horseeday in iyana lagu qaado xukun dil ah.
Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage “Sheekh Cali Dheere”, ayaa wuxuu ku goodiyay inay u aar-gudi doonaan, dadkii maanta lagu qisaasay Magaalada Boosaaso.
Toogashada ayaa waxay ka dhacday Tiirka Biyo Kulule ee Magaalada Boosaaso, iyadoo goobta ay qisaastu ka dhacday uu ku geeriyooday Sarkaal reer Garoowe ah, markii uu si kedis ah uu uga dhacay qorigii uu wax ku dilaayay.
Dhagayso:- Afhayeenka guud ee Al-shabaab oo Hanjabaad Kulul u diray Maamulka Puntland iyo Ciidamadda Amaanka Puntland oo Heegan la galiyay.
WAAJIDPRESS – 30 Apr 2013:
Afhayeenka guud ee kooxda Al-shabaab Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa ka hadlay Malayshiyaad ka tirsan Kooxdooda oo Maanta Maxkamadda Ciidamadda Maamulka Puntland ay ku fulisay Dil toogasho kadib markii lagu helay danbiyadii lagu cadeeyay.
Cali dheere ayaa sheegay Dilkaasi in ay ahaayeen kuwa Sharci daro ah wuxuuna ku goodiyay Cali dheere in ay ka aarsan doonaan Maamulka Puntland.
“Waxa ka dhacay Boosaaso waa dhacdo aanan ka dhicin wadamada Muslimiinta ee xorta ah balse waa dhacdo inta badan ka dhacda dalalka Muslimiinta ah ee ay gaalada iyo gaalaraacyadu xooga ku haystaan” ayuu yiri Cali dheere oo hadlay.
Cali ayaa sheegay in Kooxdoodu marar badan hore uga digeen dadka Muslimiinta ah in Puntland ay dhacdooyin noocaan oo kale ah kula kici doonaan, gaar ahaan markii ay Muqdisho dadka ku xasuuqeeyn sida uu sheegay Malayshiyaad ka tirsan Kooxdooda.
Dhinaca kale waxaa Caawa Heegan buuxa la galiyay Ciidamadda Amaanka magaalooyinka waawayn ee Puntland sida Garowe, Boosaaso, Gaalkacyo, iyo deeganada kale iyadoo laga cabsi qabo weeraro aar gudasho ah in ay sameeyeen Al-shabaab.
War deg deg ah: Sheikh Cali Dheere “Wixii maanta ka dhacay Boosaaso waa laga aargudi doonaa”
Muqdisho – Ururka Al-Shabaab ayaa ku hanjabay in ay u aargi doonaan dad maanta lagu toogtay magaalada Boosaaso ee gobalka Bari.
Afhayeenka ururka Al-Shabaab Cali Maxamed Raage (Cali Dheere) oo la hadlay idaacad ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa sheegay in maalmaha soo socda loo aargudi doono 13-dhallinyaro ah oo haweeney ay ku jirto lagu toogtay maanta duleedka magaalada Boosaaso.
Cali Dheere ayaa daaha ka qaaday in dhammaan dadkii maanta la toogtay inaysan wax xiriir ah kala dhaxeyn Ururkooda, balse loo dilay iyagoo dad Muslimiin ahaa, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Cali Dheere ayaa ku goodiyay in aan maamulka Puntland looga hari doonin dilka ay u geesteen dadkii la toogtay, isla-markaana ay Al Shabaab ka bixin doonto sida uu yiri jawaab.
Cali Dheere ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay ururkooda in ay ciqaab adag la beegsan doonto, cid kasta oo ka qayb qaadatay dilka 13-ka qof ee lagu toogtay Boosaaso.
” Ha ogaadaan qof weliba oo kaalin ka gaystay falkaas haddii ay ahaan lahaayeen kuwii dilka fuliyay, kuwii xukunka riday, kuwii jaasuusay iyo kuwii marqaati-beenaadka ku furay in dhammaantood ciqaab adag la kulmi doonaan.” ayuu yiri Cali Dheere.
Si kastaba, hadalka Cali Dheere ayaa ku soo beegmaya iyadoo maanta magaalada Boosaaso lagu toogtay 13-qof oo qaar kood la sheegay in ay ka dambeeyeen dilkii bishii December ee sanadkii 2011 loogu geystay magaalada Boosaaso Dr. Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan.
Ammaanka magaalada Boosaaso ayaa caawa aad loo adkeeyay waxaana magaalada ka jirta xiisad iyo cabsi ballaaran.
War deg deg ah: Dhagayso:- Maamulka Puntland “Xasan Sheekh Dastuurka uu Wato maaha Midkii Saxda ahaa ee Soomaali ku heshiisay”.
Sida uu Warbaahinta u sheegay Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir Dastuurka ay ku dhaqanto Dowladda Soomaaliya ee Hormuudka u yahay Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu sheegay in aysan ahayn Dastuurkii Saxda ahaa ee ay saxiixayaasha Rod Mapku saxiixeen.
Wasiirka ayaa sheegay in arintaasi ay tahay Khayaano Qaran oo ay galeen Madaxda Dowladda wuxuuna ka digay in arintaasi ay sii socoto.
Wuxuu sheegay arintaasi markii ay Puntland aragtay in ay kala hadashay Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona ay labada dhinac balan qaadeen inay arintaasi cidi samaysay talaabo ka qaadi doonaan.
Sidoo kale wuxuu Wasiirku ka hadlay arimaha Jubbooyinka iyo Shirka London oo labada dhinac qodobadii ay isku soo qaadeen iskuna afgaran waayeen ay kamid ahaayeen.
War deg deg ah: Dhagayso:- Saraakiil uu Hogaaminayo Coll Cabaas oo Maanta gaaray Kismaayo.
Waxaa maanta gaaray degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Coll Cabaas Cali Gurey oo kamid ah Saraakiisha dowladda FEDERAALKA ee gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ka howlgala.
Coll Cabaas ayaa waxaa ku wehelinaya Safarkiisa Abaanduulaha Ciidamadda Xogga dalka ee gobolka Gedo Nuur Xasan IYO ku xigeenka Col. Isaaq Kuusow Yarow, Waxaana waftigani ay kasoo kicitimeen magaalada Faxfaxdhuun ee gobolka Gedo halkaasi oo ay fariisimo ku leeyihiin Ciidamadda dowladda.
Cabaas oo la hadlay Waajidpress markii uu gaaray degmada Kismaayo ayaa sheegay socdaalka uu ku gaaray kismaayo in uu yahay mid ay ku xoojinayaan amaanka deeganada Jubbooyinka, wuxuuna yiri ma aaminsanin shir ku sheega Jubaland ee la dhoodhoobey,wuxuna xusay Amanka degmada Kismaayo iyo degeanada kale ee Gedo marka bar bardhig la isku sameeyo in amaanka Kismaayo uu yahay mid siwayn u liita, isagoona Tibaaxay sidoo kale in ay jiraan dhibaatooyin loo gaysto dadka rayidka ah ee ku sugan Kismaayo.
Dhinaca kale mar aan wax ka waydiinay in uu ka qayb qaadanayo shirka Maamul u smaaynta deeganada Jubbooyinka ee ka soconaya Kismaayo ayuu sheegay in hadii uu shirku yahay mid ay dadka deegaanku u madax banaanyihiin ay qaybtooda ka qaadanayaan.
War deg deg ah: Dagaal xoogan iyo weerar madaafiic ah oo Al-Shabaab ay ku qaadeen Garoonka Kismaayo
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose weerar madaafiic ah iyo dagaal xoogan ayaa lagu qaaday Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo.
Dagaalka iyo weerarka madaafiicda ah oo isbarbar socday ayaa wararka waxa ay sheegayaan inay soo qaadeen dagaalyahano ka tirsan xoogaga Shabaab kuwaasi oo qalqal-geliyay garoonka Kismaayo.
Sida ay lee yihiin wariyaal ku sugan Kismaayo, dhowr madfac ayaa laga maqlay garoonka diyaaradaha oo 14-km u jirra magaalada.
Saqdii dhaxe ee xaley ayaa lasoo sheegayaa in ciidamo ka tirsan Shabaab ay hoobiyaal kusoo weerareen Gudaha Garoonka Diyaaradah ee Magaalada Kismaayo halkaasi oo ay farisamo ku leeyihiin ciidamada AMISOM gaar ahaana kuwa Kenya iyo kuwa Dowlada Soomaaliya.
Ilaa hadda si rasmi ah looma ogga khasaare ka dhashay madaafiicda xaley lagu racaay garoonka diyaaradaha Kismaayo, laakin afhayeenka ururka Raaskambooni Cabdinaasir Seeraar Maax oo la hadlay VOA ayaa sheegay in weerarkaas uusan jirin wax khasaaro ah oo ka dhashay, wuxuuna intaas ku daray in ay carareen kooxda garoonka soo weerartay.
Mar la weydiiyay cida ku sugneed garoonka xilliga la soo weeraraayay, wuxuu yiri garoonka waxaa ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya.
DAAWO: MALAAQ KA TIRSAN MALAAQYADA DIGIL IYO MIRIFLE OO KA HADLAYA HORUMARINTA FARTA MAAY MAAY-ga
Alhriso: SIDA ay hadalada laga qariyey saxaafada OO ay is dhaafsadeen FAROOLE IYO MADAXWEYNE XASSAN Shiikh
Waxaanu halkan idiinku soo bandhigaynaa hadaladii qarsoonaa ay is dhaafsadeen FAROOLE IYO MADAXWEYNE XASSAN SHIIKH:
Faroole: Xasan Shiikhoow hore kuumaan aqoon, inaan kaa arko Muraayadaha maahee, waxaan ku weydiiyey shirka jaraa’idna waad ka sheegtaye Federaal noocee ah ayaad jeclaan lahayd illeen kolay kuma qanacsanid, Maamulada hadda jira ee Putland iyo kan dhalan raba ee Jubbaland.
M. Xasan: Cabdiraxmaan sida igu maqaalaha ah waxaad tahay nin masuula oo dad badan hormuud u ah, horena dowladihii hore uga soo shaqeeyey inkastoo aanan aqoon waxaad ka soo qabatey, Qurbaha ama shaqadaad ka shaqayn jirtey, balse kaama muuqdo hadal miisaan siyaasadeed leh, sidaa awgeed anigu kuma fadhi ku diriro, arrimaha Umadda Soomaaliyeed mana aha wax ruwaayad ah ee aan sida masuuliyad leh u sheekaysano.
Faroole:Xasan Ma joogno xafiiskaagii Madaxtooyadana kamana tirsani Shaqaalahaaga ee waxaan ahay Madaxweynaha Dowladda Puntland waa inaad sida laba Madaxweyne u wada hadalnaa haddii kale shirku waa xidhan yahay?
M. Xasan: Ma wanaagsana in xilkasnimada laga tago, Madaxweynenimaduna maaha wax qasab iyo xoog lagu keeno, waxaad tahay Gudoonka, ama Madaxa Gobollada Barri haddaan si kale u dhigo waxaad tahay nin deegaankiisa dadka joogaa u igmadeen inuu ka arrimiyo intey degaan, aniguna waxaan ahay Madaxweyne Soomaaliyeed oo ay dhammaan umadda Soomaaliyeed si xornimo ah ku doorteen, inta aad hawsha leedahay waad taqaan inta aan leeyahayna waan aqaana ee waxaad warbixin miisaaman iga siisaa, hawlaha Maamul iyo waxqabadka deegaanka.
Faroole: Xanshashaq hoose[War maaniguu gurigayga igu canaanayaa haddaan la dagaalamona armey bulshada Caalamka ee ninkan Aqoonsani Qaswade iga dhigaan] Xasan waad aragtaa quruxda iyo bilicda Puntland saw ma aragtid carafta iyo wanaaga Federaalka,Anagu Dowladnimada aad sheeganayso waxaa dhisay Puntland, Federaalka waxaa hirgeliyey Puntland, Dastuurka waxaa hirgeliyey Puntland, waxaa Caalamka indhahooda ku soo jeediyey Soomaaliya waa Dowladda Puntland,markaa waa inaad oggaata inaysan Puntland ahayn wax la dhayalsan karo.
M. Xasan: Waxaan halkan u imid inaad Oggaado oo u kuurgalo Xaaladda Maamul, deegaan, dad iyo dhammaan hawlaha ka socda umadda aan Madaxweynaha u ahay inaan Oggaado, Midna Oggoow Puntlandta aad Carabka ku dhejinayso waa Umad Soomaaliyeed, waana Shacabka aan Madaxweynaha u ahay, Balse waxaan walaal mar kale kuugu celinayaa, in Barnaamijkii isku dherersiga iyo tartan Siyaasadeedkii waa dhammaadey Roadmapkiina waxaa ugu danbaysay 20 August markaa si masuuliyad ku dheehan tahay u hadal, faankan iyo fadhi ku dirirkana iga daa waxaa ii taal shaqo badan waxaanan kaa sugayaa warbixin hadda waxaan aaday meeshaad ii diyaarisay ee aan ku nasan lahaa.
Faroole: Madaxweyne Xasan miyaad xanaaqdey? Dadku waa nabad dalkuna waa wanaagsan yihiin, horumar ballaaran ayaa ka socda, dhawaan waxaa deeq na soo gaarsiiyey aan mudo sugeynay, Talyaaniga, ciidamada deegaanku waa dhisan yihiin, inkastoo aan filayno, qalabkii dhawaan laydiin oggolaaday iyo shixnadaha Hubka inaad qaybtayada na soo gaarsiisaan.
M. Xasan: Mudane waa arrin wanaagsan, balse waxaa igu maqaale ah inaad adigu ka soo horjeeday in Cunaqabateynta hubka laga qaaddo, dalka Soomaaliya, haddana mawqifkaagii ma waxba iska bedelay, mise waa halkiisii, anagu dowladda aan madaxda ka ahay, Gobollada dalku waa u siman yihiin, meel walbana horumarka waa la gaarsiinayaa, dhinac walba, waxbarasho, caafimaad, dhaqaale, mashaariic horumarineed iyo qalabaynta ciidanka, ee adigu ma ogoshahay, in ciidanka halkan aad ku haysaan ka qayb qaato xoreynta dalka si looga maarmo ciidamada kale ee afrikaanka ah, shakiga iyo werwerkuna kaaga baxo.
Faroole: Wallee inaynaan is fahmayn waa caddahay, balse waxaan kuu sheegayaa, anagu dastuurbaan leenahay wuxuu dhigayaaa in ciidanka Puntland uusan dhaafin xuduuda Puntland, in dhaqaalaha aanan u daba fadhiisan dowladda Federaalka ee koontadayada ku soo dhacaan, in siyaasadda Arrimaha dibada, heshiisyada iyo wax walba aanu u madax bannaano.
M.Xasan: Waxaan filayaa taasi maaha Federaal ee waa dowlad madax bannaan, waxaa jira ayaan filayaa feker idiin dahsoon balse aydaan weli go’aan rasmiya ka gaarin, kama wada hadlayno kamana gorgortamayno, midnimada Soomaaliyeed, diidmadeeda iyo Yeelideedana idinkaa u xor ah, balse waxaa kuu sheegayaa, dalku Dowlad keliya, Dastuur keliya, Baarlamaan keliya, Calan keliya, Ciidan keliya, Lacag keliya, Madaxweyne Keliya, Ra’iisalwasaare keliya ayuu leeyahay, Magacan aad la baxdey ee madaxweyne ayaa wuxuu ku jiraa waxyaabaha go’aamada Baarlamaanku ka qaaddanayo Gudoonka Gollaha deegaanka inaad noqoto, ama Madax Gobollka( Head Bereue) ama Madaxa Fullinta( Head Excutive) markaa war jiraaba cakaaruu iman, Cabdiraxmaan waan kuugu celinayaa waa laga baxay xiligii ku meel gaadhka, haddaad doonaysid inaad sidan oo kale u sheekayso, isa soo diyaari oo xilkan iska wareeji, 4 sano ee danbena isu soo sharax Madaxweynaha Soomaaliya.
Faroole: Arrimaha Jubbooyinka side u aragtaa? Maxaadse ka bedesheen mawqifkiina Dowlad ahaan?mise waxaad weli ku taagan tahay waxba kama jiraan shirkaas nabadda iyo wanaaga iyo dowlad goboleedka lagu arriminayo?
M. Xasan: Hore ayaan kuugu sheegay qadiyada Soomaaliya inaysan Qosol iyo Kaftan dhankayga ka ahayn, fadhi ku dirir iyo sheeko maqaaxiyeedna maaha Siyaasaddu, Jubbooyinku waa dhul Soomaaliyeed waxaana taladooda iska leh dadka Soomaaliyeed iyo Dowladda Soomaaliyeed. Puntland waa Dhul Soomaaliyeed waxaana taladeeda iska leh Shacabka Soomaaliyeed iyo Dowladda Soomaaliyeed, mana aha macnaha Federaalka maaha in lays garab gurto ee waa in si wanaagsan loo shaqeeyo, bal raadi oo baadi goob inta nooc ee ka jirta Federaal Adduunka wax sida aad u dhaqmayso oo kale u dhaqmaya haddaad heshona isoo wac.
Faroole: Anigu kolay intaan halkan joogo sidan baan u wada shaqayn doonaa, saw maad Arag in Kursiga aan fadhiyo iyo kaagu isku mid yahay, saw maad arag in Ubaxa qoorta laguu sudhay ana lay sudhay, saw maad in Calanka gadaashada Yaalay anigana uu yaal, Saw maad arag in Magacayga Madaxweyne ka Horeyso kaagana Madaxweyne, inta aad ku tahay madaxweyne ayaan ku ahayn, Cod Baarlamaan, Dastuur iyo Calan shirkuna waa xidhan yahay.
M.Xassan: Waxaad tahay nin Riyoonayaa, markaad toosto ayaad oggaanaysaa, waxaanse kugula dardaamayaa inaad bulshada la hadhin oo aadan ka reebin dadkooda iyo dalkooda wa bilaahi tawfiiq.
Dhagayso:- Qaar kamid ah Beelaha Sade ee Kismaayo ku sugan oo Kalsoonidii kala Laabtay Nabadoon Bashiir Yarow.
Shir Jaraa’id oo Magaalada Kismaayo ay ku qabteen qaar kamid ah Salaadiinta Beesha Sade gaar ahaan kuwa ku Nool Magaalada Kismaayo ayay kalsoonidii ogala laabteen Maxamed Bashiir Yaroow .
C/salaan Xasan Aadan oo kamid ah Salaadiintii Shirka Jaraa’id ku qabtay kismaayo ayaa Saadaal Media oga warbixiyay sababaha keenay in Kalsoonidii kala laabtaan Nabadoonkii guud ee Beesha Sade gaar ahaan Waamo.
Maxamed Bashiir Yarow ayay ku sababeyeen Xil ka qaadistiisa kadib markii uu kasoo bixi Waayay waxyaabihii ay beeshu u idmatay, waxaana ay ku eedeeyeen in uu nin Jeclaysi iyo Cadaalad daro Sameeyay.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Abriil, 2013.